श्रीमतीको यस्तो दवावपछि विराटनगरका डाक्टर शाहले गरे ८ तलबाट कुदेर आ’त्म”ह’त्या - itnewsnepal
श्रीमतीको यस्तो दवावपछि विराटनगरका डाक्टर शाहले गरे ८ तलबाट कुदेर आ’त्म”ह’त्या
भारतको हरियाणास्थित मेदान्त अस्पतालमा कार्यरत नेपाली चिकित्सक सुजितकुमार साहको निधन भएको छ । ३९ वर्षीय साहको मंगलबार एउटा अपार्टमेन्टको आठौं त-लाबाट ख’सेर निधन भएको हो । पारिवारीक श्रोतका अनुसार डा. साह मंगलबार बिहान गुरुग्रामस्थित सेक्टर ४७ स्थित उनी बस्दै आएको अपार्टमेन्टको आठौं तल्लाको कौसीबाट ख’सेका थिए । कौसीबाट ख’सेका साहको अवस्था निकै नै ग’म्भीर थियो । ग’म्भीर अवस्थामा घाइते भएका साहलाई तत्कालै नजिकैको मेदान्त अस्पताल पुर्याइएको थियो । तर, अस्पताल पुर्याईएका साहलाई चिकित्सकले मृ’त घोषित गरि दिए । पारिवारिक स्रोतका अनुसार प्र्रहरीले प्रारम्भिक छानबिनमा चिकित्सक साहले आठौं तलाबाट हा’म फा’लेर देहत्याग नै गरेको बताएको छ । यद्यपि श’वको पोस्टर्माटम हुन बाँकी रहेकाले प्रहरीले निधन को कारण निर्क्यौल गर्न भने बाँकी छ ।
विराटनगर निवासी डा. साह विगत चार वर्षदेखि मेदान्तमा लिभर ट्रान्सप्लान्ट युनिटमा कन्सल्ट्यान्टका रुपमा कार्यरत थिए । डा. सुजित अर्पाटमेन्टमा एक्लै बस्दै आएका थिए । उनको पश्चिम बंगालकी एक चिकित्सकसँग नै विवाह भएको थियो । डा. सुजित सोमबार साँझसम्म पनि मेदान्त अस्पतालमा ड्युटीमा थिए । र, सहकर्मीहरुका अनुसार उनी त्यसदिन पनि अन्य दिनजस्तै सामान्य अवस्थामा थिए । पारिवारिक स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय साह र उनकी श्रीमतीबीच दम्पतीबीच राम्रो सम्बन्ध नभएको र श्रीमतीले छोडपत्रका लागि द’बाब दिँदै आएकी थिइन् । त्यही द’बाबले उनलाई देहत्याग गर्ने परिस्थितिमा पुर्याएको आशंका साह परिवारले गरेको छ । मृतक साहको परिवारले पनि उनलाई देहत्याग गर्न बा’ध्य पारिएको भन्दै छानबिनको माग गरेको छ ।
यो पनि प्ढ्नुहोस: यो कुरा सुरु भएको थियो २०७४ सालको नयाँ वर्षको दिन। बैशाख १ गते निन्द्राबाट ब्युझिए लगतै देब्रे हतको नाडीमा केही असहज महसुस भएको थियो। खस्रो चिज हातमा कोरिएको थियो, हेर्दा ट्याटुजस्तो देखिने छाम्दा भने कुनै कुरा टाँसिए जस्तो। बेलुका सुत्दा सामान्य नै रहको हातमा एकाबिहानै आएको अस्वभाविक परिवर्तनसंगै अनौठो अनुभुति भएपनि म डराएँ। छिटो छिटो खाटबाट उठेर बाथरुम पसेर हातमा साबुन लगाएँ। मज्जाले मिचे,पखाले। सो ट्याटु जस्तो चिज पखालिएन, बरु त्यसको रंग चेन्ज भयो। कालो गोलो घेरा देखियो। गोलो घेरा भित्र रेखाहरु आफसे आफ कोरिन थाले। हेर्दा हेर्दै गोलो आकारको दाँया बाँया घडीको दम जस्ता दुई आकार देखियो। अब घडी जस्तो आकृति प्रस्ट देखियो। घडीको १२ अंकको ठाउँमा एउटा सानो थोप्लो र ६ अंक रहने ठाउँमा अर्को थोप्लो देखे।
नेपालमा एकै दिन १०१६ जनामा कोरोना संक्रमण
धर्म गर्न घरबाट निस्केको मान्छे पाप गरेर घर फर्कियो – रबि लामिछाने